By ဝေယံအောင် 10 October 2017
၁။ မြန်မာဘောလုံးအသင်းနှင့် ကာဂျစ္စတန်ဘောလုံးအသင်းတို့၏ အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို သုဝဏ္ဏအားက စားကွင်းတွင် ၁၀.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ည ၇ နာရီတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်များကို ၁ ထောင် ကျပ်မှ ၃ သောင်းကျပ်အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး4Sports ရုပ်သံလိုင်းမှလည်း ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
၂။ တေးသံရှင်အမွန်း၏ Very Dangerous ( အချစ်ဗို့ ၁၅၀၀) Album ပရိုမိုးရှင်းပွဲကို လှည်းတန်းစင်တာတွင် ၁၁.၁၀. ၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပရိုမိုးရှင်းပွဲတွင်အမွန်းနှင့်အတူ အနုပညာမောင်နှမ များက လက်မှတ်ရေးထိုးဖျော်ဖြေပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းအစီအစဉ်များလည်းပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
၃။ DJ တေးဂီတများနှင့် အပန်းဖြေလိုသူများအတွက် Mid-October Night ပါတီပွဲကို ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းအနီးရှိ Vintage Luxury Yacht ဟိုတယ်တွင် ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီတွင် စတင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေး ၁ သောင်းကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၆၁၅၅၅၀၇သို့ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် နိဗ္ဗာန်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်းရှိ နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပွဲတွင် ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပညာရှင်များကို ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းနှင့် ရုပ်ရှင်အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှပြုလုပ်မည့် စတုဒီသာအလှူပွဲ များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင် းသိရသည်။
၅။ အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဆရာ ၇ ဦးပါဝင်သည့် Thuma Collective Launch မိတ်ဆက်ပွဲကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၄ လမ်းရှိ Myanmar Deitta အနုပညာပြခန်းတွင် ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ညနေ ၅ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အ ဆိုပါမိတ်ဆက်ပွဲတွင် သူမအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဓာတ်ပုံလက်ရာများကို ပရိုဂျက်တာဖြင့် ပြသသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံပညာကို စိတ်ဝင်စားသော အမျိုးသမီးများအတွက် ၎င်းတို့ပြောပြချင်သည့် ဇာတ်လမ်းများကို ပြောပြရာတွင် ဓာတ်ပုံကို ဘာသာစ ကားတခုအနေဖြင့် အသုံးချတတ်လာစေရန် တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
၆။ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် အကမျိုးစုံပါဝင်မည့် Street Dance & Street Food ပွဲတော်ကို ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တွင် ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၇။ NESTLE CERELAC ရဲ့ Moms’ Superstars ပွဲကြီးကို ပြည်သူ့ရင်ပြင် Love Stones ကွင်းတွင် ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (၂) နှစ်အထက် ကလေးငယ်များအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ Game အစီအစဉ် များ၊ မိခင်များအတွက် ဗဟုသုတရစေမည့် အစီအစဉ်များ၊ အာဟာရပြည့်ဝစေသည့် ပြင်ဆင်နည်းများအပြင် လက်ဆောင် များလည်း ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၈။ အိမ်ရာချေးငွေများနှင့် အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်မည့် Shwe Property အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲကြီးကို အထက်ပန်းဆိုးတန်း လမ်းရှိ Rose Garden Hotel (Inn Gyin Ballroom) တွင် ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အရောင်းပြပွဲကြီးတွင် စီးပွားရေးလောကမှ နာမည်ကျော်ပညာရှင်များ၏ဟောပြောပွဲများ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၉။ ပန်းချီမင်းမင်းထိုက်၏ FACE ? တကိုယ်တော်ခဲပန်းချီပြပွဲကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၃ လမ်းရှိ 43 Art Gallery တွင် ၇.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် တောင်ပေါ်ဒေသတိုင်းရင်းသားများနှင့် နယ် ပယ်စုံမှထင်ရှားသူများ၏ပုံတူပန်းချီကားများကို ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၁၀။ ပန်းချီဆရာ ၄၉ ပါဝင်မည့် မဟာဈာန်ပန်းချီပြပွဲကို ကန်တော်ကြီး၊ ကရဝိတ်ခန်းမအနီးရှိ မဟာဈာန်ပန်းချီပြခန်းတွင် ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပန်းချီပြပွဲတွင် မီဒီယံအစုံ၊ လက်ရာစုံပန်း ချီကား ၁၀၀ ကျော်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။